“Maanta Xamar Waxa Ka Socda Doorashadii Somaliland….” Faysal Cali Waraabe – somalilandtoday.com
“Maanta Xamar Waxa Ka Socda Doorashadii Somaliland….” Faysal Cali Waraabe
(SLT-Hargeysa)-Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa waali iyo layaab ku sifeeyay doorashooyinka dowladda Somaaliya gadhwadeenka ka tahay ee dadka reer Somaliland loogu qabanayo magaalada Muqdisho.
“Maanta Xamar waxa ka socda doorashadii Somaliland ee aqalka sare iyo aqalka hoose, in ay dadku waalanyihiin ayaan idiin sheegayaa, bal dadkan caga badnaanteenu inoogaysay 1960 waa cagliga maanta ku leh gudidii doorashooyinka Somaliland ayaa la samaynayaa bisha todobadeeda” ayuu yidhi.
Guddoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa ku baaqay in sharci laga soo saaro dadka ka shaqeeya arrimaha Soomaaliwayn, waxaanu golaha wakiilada Somaliland ee dhawaan la doortay ugu baaqay in ay ka howlgaal sharciyo lagu xakamaynayo dadka ku lugta leh arrimaha.
“Ilaa shirkii Carta ee 2000 ayay bilaabeen in ay qaar ina sheegtaan oo magaceena heshiisyo ku galaan, waxan baarlamaanka cusub leeyahay 75% sharciyada in ay dowladu soo saarto weeyaan oo baarlamaankuna ka eego, dowladu waxba soo saari wayde howshaasi idinka ayay idin haysataa” ayuu yidhi.
Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ayaa marar kala duwan xukuumada Somaliland iyo golayaasha sharci dajinta ugu baaqay in ay sharci kasoo saaraan dadka ku eedaysan in ay xidhiidh la leeyihiin dowlada Soomaaliya.